क्वाँटी अर्थात् तातो झोल- कला - कान्तिपुर समाचार
पहिलेका मानिसलाई वैज्ञानिक तथ्य थाहा थिएन तर पनि उनीहरूलाई खानेकुरा ब्यालेन्स गरेर भने खान आउँथ्यो, ऋतु अनुसारका खानेकुरा खान आउँथ्यो ।
भाद्र ११, २०७५ सुनीता साखकर्मी
भक्तपुर — क्वाँटी अर्थात् तातो झोल । जनैपूर्णिमा अर्थात् गुन्हीपुन्हीको दिन नेवार समुदायमा विभिन्न थरीका नौ गेडागुडीको टुसा उमारी क्वाँटी पकाएर खाने चलन छ । सानो–ठूलो केराउ, मास, मुगी, मस्याङ, बोडी, भटमास, बकुल्ला, चनालगायत नौ थरीका गेडागुडी मिसाएर क्वाँटी बनाउने गरिन्छ ।
संस्कृतिविद् ओम धौभडेलका अनुसार नेवार समुदायमा नागपञ्चमीपछि चिसो सुरु भएको विश्वास गरिन्छ । यो समयमा पानी पर्ने र त्यसका कारणले बालकदेखि वृद्धसम्मलाई रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या भई धेरै मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेपछि क्वाँटी खाने परम्परा सुरु भएको उनी बताउँछन् ।
‘क्वाँटी खाने चलन कसले चलायो भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘तर रोगले आफन्तको मृत्यु हुन थालेपछि भने पुर्खाहरूले यसलाई रोकथाम गर्ने उपाय खोज्दा क्वाँटी पत्ता लगाएको देखिन्छ ।’
धौभडेलका अनुसार, नेवार समुदायभित्र पनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले जनै पूर्णिमा र गाईजात्राको दिन अनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पञ्चदानका बेला क्वाँटी खान्छन् । कुनै घरबाट गाईजात्राको दिन गाई निकालिन्छ भने कसैले चाहिँ ‘घिन्ताङ घिसी’ खेल्ने, बाजा बजाउने र आफन्तजनलाई क्वाँटी बनाएर खुवाउने गछन् ।
नेवार पात्रो अनुसार भदौ नवौँ महिना हो । त्यसैले यो महिना ‘गुन्ही पुन्ही’ भनेर नौ दिन जात्रा मनाउने, नौ थरीका गेडागुडी खाने र नौ थरीका लुगा लगाउने चलन रहेको धौभडेलले बताए । पानी पर्ने मौसम भएकाले घरको ढुकुटीमा राखिएका खानेकुराहरू ओसिने वा ढुसी पर्ने हुँदा यसको सदुपयोगका लागि पनि क्वाँटी बनाएर खाने चलन रहेको उनले दाबी गरे । क्वाँटी मात्रै नभई उपत्यकामा चामल, तिल, कुश, जौ र जल पञ्चगव्य राखी पोको पारेर हातमा ब्राह्मणले पञ्चरंगी डोरा बाँधिदिने चलन पनि छ । यो दिन बाँधेको डोरो तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन गाईको पुच्छरमा बाँध्ने चलन पनि छ ।
गेडागुडीको टुसा उमारेर खाइने भएकाले डा. अरुणा उप्रेतीका अनुसार क्वाँटी ‘जीवित खाना’ हो । ‘गेडागुडी पानीमा भिजाई कपडाले छोपेर राखेपछि त्यसमा टुसा उम्रिन्छ । यसरी उमार्ने प्रोसेसले गेडागुडीमा भएका भिटामिन र प्रोटिनहरू २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पनि बढ्छन्,’ उनले भनिन्, ‘गेडागुडीलाई छुट्टाछुट्टै पकाउनुभन्दा पनि एकै ठाउँमा राखेर पकाउँदा ती भिटामिन र प्रोटिनहरू एकअर्कामा सर्न पाउँछन् ।’ मासु नखानेहरूका लागि पनि यो परिकार एकदमै फाइदाजनक हुने उनको ठहर छ । गेडागुडी बोक्रासमेत राखेर पकाइने हुँदा यसमा भएको रेसादार पदार्थले कब्जियत हुन नदिने उनले बताइन् ।
नेवार समुदायमा आजदेखि जाडो लाग्यो भन्ने विचार भएकाले क्वाँटीले तातो गराउँछ भन्ने जनविश्वास छ । क्वाँटीमा राखिने चनामा प्रोटिन र भटमासमा क्याल्सियम हुने भएकाले यसले बढ्दो उमेरका बालबालिका, भर्खर बिरामीबाट उठेकालाई समेत फाइदा पुग्ने डा. उप्रेतीले बताइन् । उनका अनुसार, यो संस्कृति नेवार समुदायमा मात्रै नभई सुदूरपश्चिममा पनि छ । सुदूरपश्चिममा गौरा पर्वका बेला बिडौरा बनाएर खाने गरिन्छ । गेडागुडीकै टुसा उमारेर बनाउने गरिन्छ ।
‘पहिलेका मानिसलाई वैज्ञानिक तथ्य थाहा थिएन तर पनि उनीहरूलाई खानेकुरा ब्यालेन्स गरेर भने खान आउँथ्यो, ऋतु अनुसारका खानेकुरा खान आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘म पनि हप्तामा एकदुई चोटि क्वाँटी खान्छु र अरूले पनि खानुपर्छ भन्ने सल्लाह दिन्छु । म हरेक दिन मेथी उमारेर पनि खाने गर्छु । मेथीमा आइरन हुने भएकाले यसले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्छ ।’
टुसा उमारेर लिटो
डा. उप्रेतीले अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया जाँदाको अनुभव सुनाउँदै बच्चाहरूलाई खुवाउने लिटो पनि टुसा उमारेकै गेडागुडीबाट बनाउँदा राम्रो हुने बताइन् । तर नेपालमा लिटो बनाउन पनि विभिन्न गेडागुडीलाई टुसा उमार्ने चलन छैन ।
‘मैले इथियोपिया जाँदा त्यहाँ बच्चाहरूलाई कुपोषणबाट बचाउनका लागि गेडागुडीको टुसा उमारेर त्यसलाई पिनेर लिटो बनाउने गरेको थाहा पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी पनि त्यस्तै गर्न सक्छौं । यसले हाम्रा बच्चाहरू पनि स्वस्थ हुन्छन् ।’ त्यसरी बनाएको पिठोलाई रोटीका रूपमा, दालका रूपमा, अन्डासँग अम्लेटका रूपमा पनि खान सकिने उनले जनाइन् ।
भक्तपुरमा पकाइने क्वाँटीमा ज्वानो फुराउने गरिन्छ भने पाटनमा ज्वानोको सट्टा ललिचा घाँस राखेर पकाउने चलन रहेको संस्कृतिविद् ओम धौभडेलले बताए । क्वाँटीलाई पुर्खाले रोगव्याधिबाट बच्न र बचाउने अभ्यासको क्रममा पत्ता लगाएको औषधि मान्छन् उनी । ज्वानो फुराउने सन्दर्भमा नेवार समुदायमा एउटा कथन पनि छ– क्वाँटीमा ज्वानो फुराउँदा लामखुट्टेको सुँड पनि डढ्छ र अब त्यसले टोक्न सक्दैन ।
पाटनबासी संस्कृतिविद् कीर्तिकिरण जोशीका अनुसार, अहिले क्वाँटीमा ललिचा घाँस मिसाएर खाने परम्परामा कमी आएको छ । क्वाँटी भने अहिले पनि धेरै खाइन्छ । पाटनमा जनैपूर्णिमादेखि एक महिनासम्म पनि क्वाँटी खाने चलन रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:४१
जो गीतकार पनि उत्तिकै राम्रा थिए
‘गोपाल योन्जनका गीत आत्मबल जगाउने खालका, सबै समुदायको पहिचान प्रस्तुत गर्ने खालका, बिम्बले भरिपूर्ण छन् । राष्ट्र भनेको संस्कृति, जनताको आत्मबल र देशभक्ति हो भन्ने चेत उहाँका गीतमा पाइन्छ ।’
काठमाडौँ — समाज निर्माणमा संगीत–साहित्यको भूमिका के हुन्छ ? संगीत र फिल्मले कसरी दिशानिर्देश गर्छन् ? हत्या–हिंसा, बलात्कार जस्ता अपराध बढ्नु वा बौद्धिक पलायनमा रुचि बढ्नुमा कलाको कस्तो प्रभाव हुन्छ ?
आइतबार यी प्रश्नको जवाफमा संगीतज्ञ गोपाल योञ्जन जोडिएर आए । सांस्कृतिक संस्थान (नाचघर) मा योञ्जनका गीत–संगीतमाथि लामै परिचर्चा भयो । संगीतकर्मी, साहित्यकार, पत्रकारदेखि राजनीतिकर्मीले योञ्जनलाई आ–आफ्ना कोणबाट औंल्याए । उनका राष्ट्रिय गीतलाई पर्गेल्ने क्रममा अधिकांश वक्ताले गोपाललाई क्रान्तिकारी रचनाकार भन्न रुचाए ।
‘गोपाललाई अनुसरण नगर्नाले नै अहिले बलात्कारजस्ता घृणित घटना भइरहेका हुन्,’ गायक रामेशले भने, ‘उनलाई बुझ्ने युवा अमेरिका पलायन हुँदैन ।’
रामेशले अहिलेको भद्दा कलाकारिताकै कारण समाजमा विकृति र अपराध जागेको बताए । ‘काटमार बिनाका फिल्म बन्दैनन्,’ उनले भने, ‘नारीलाई आकर्षक वस्तुका रूपमा देखाइन्छ । पैसाको लागि दौडिन्छन् पात्रहरू । संगीतको उस्तै हालत छ । त्यस्ता चिजले युवालाई दिग्भ्रमित पारेका छन् ।’
गोपाललाई गायक र संगीतकारको मात्र पगरी गुथाएर उनको गीतकार छविलाई कसरी अलग पारिँदै छ भन्नेबारे पनि बहस चल्यो ।
‘गीत लेखन भनेको प्राज्ञिक सत्ताको विषय हो’, कवि भुपाल राई बोले, ‘यो विषयमा निश्चित जात र धर्मको सिन्डिकेट छ । त्यहाँ गोपाल योञ्जनलाई समेटिँदैन । उनलाई केवल गायक र संगीतकार भनेर सांस्कृतिक सत्तामा सीमित राखिएको छ ।’
गायक रामेशले पनि गोपाल विचारप्रधान गीतकार भएकाले उनको काव्यिक पहिचान स्वीकार गर्नैपर्नेमा जोड दिए । ‘शब्दमा विचार हुन्छ, लयमा हुँदैन,’ रामेशले भने, ‘गोपालका विचारको सम्मान गरिनुपर्छ ।’
पञ्चायत कालमा आफूहरू भूमिगत ढंगले सांगीतिक क्रान्तिमा लागिपर्दा गोपालले सत्ताबाट प्राप्त सीमित स्वतन्त्रतामै कलात्मक संगीत उत्पादन गरेको कवि स्नेह सायमीले सम्झिए । आफूहरू एउटै पथमा भए पनि कहिल्यै भेट हुन नसकेको भन्दै उनले खिन्नता प्रकट गरे । त्यही बेला भुपालले थपे, “रामेश/रायनहरू भूमिगत हुँदा, गोपाल योञ्जनले मुलधारको संगीत बजारमा एक्लै कुस्ती खेलेका थिए । ‘सुन्दर, शान्त, विशाल नेपाल...’ गाउनुपर्ने बेला उनले समाजको अशान्ति र यथार्थ देखाए ।”
‘बनेको छ पहराले...’, ‘यो मेरो टोपी...’, ‘देशले रगत मागे...’, ‘घर त मेरो हिमाली...’ जस्ता गीतको उदाहरण दिँदै गीतकार डा. कृष्णहरि बरालले पनि गोपालका गीतमा व्यक्त राष्ट्रभावको मर्म र चरित्र केलाए । ‘उहाँका गीत आत्मबल जगाउने खालका, सबै समुदायको पहिचान प्रस्तुत गर्ने खालका, बिम्बले भरिपूर्ण छन्,’ उनले भने, ‘उहाँले भूगोललाई राष्ट्र मान्नुभएको छैन । राष्ट्र भनेको संस्कृति, जनताको आत्मबल र देशभक्ति हो भन्ने चेत उहाँका गीतमा पाइन्छ ।’
देशबारे दीक्षित गराउने काम गोपालले गरेको भन्दै युवा कवि अनिता लामाले उनले संगीतमार्फत स्वतन्त्रता र क्रान्तिको हुँकार दिएको बताइन् ।
‘उहाँका गीतले परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छन्,’ राजनीतिकर्मी मणि थापाले भने, ‘त्यो बेला नै उहाँले गीतमार्फत् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा दिनुभएको छ ।’ मूलधारको संगीतमा आधुनिकीकरण गर्ने जस गोपाललाई नै दिनुपर्ने उनले बताए ।
समारोहमा गीतकार चूडामणि देवकोटा, समालोचक रामप्रसाद ज्ञवाली, बम बानियाँ र पत्रकार आस्था केसीले पनि गोपालका राष्ट्रिय गीतमाथि आ–आफ्ना बुझाइ व्यक्त गरे । संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफू गोपाललाई नै सुनेर हुर्किएको अनि उनका गीतबाट प्रभावित भएको बताए । ‘उहाँका विचार, योगदान, प्राज्ञिकतालाई व्यापक बनाऔं,’ उनले भने, ‘गम्भीर संगीतलाई छानी–छानी प्रमोट गर्ने संस्कार बसालौं । यसका लागि देशव्यापी अभियान चलाऔं ।’
मधुरिमा नेपाल र सांस्कृतिक संस्थानद्वारा आयोजित कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा कलाकारहरूले गोपालका आठ प्रस्तुत गरे । ‘देशले रगत मागे...’, ‘तिमी देऊ या नदेऊ...’, ‘बनेको छ पहराले...’, ‘मेरो पाउमा आज...’, ‘कहिलेकाहीँ मनका कुरा...’, ‘जीवनको हरेक मोडमा...’, ‘जुत्तामा हेर्दामा...’ र ‘हाम्रो खुसीको लागि...’ लाई आकाश थापा, दीपेन्द्र बज्राचार्य, राधिका भण्डारी, निर्मला घिसिङ, तीर्थराज पोखरेल, शिला विष्ट, इन्दिरा गोले लगायतले गाएका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:४०